Hetsi-panoherana manoloana ny setriny ataon’i Nepal amin’ny ady amin’ny COVID-19 ataon’ny tanoralahy iray · Global Voices teny Malagasy
Nandeha an-tongotra an'arivony kilaometatra, nanangana hetsika, ary nanao fitokonana tsy hihinan-kanina izy
Voadika ny 26 Janoary 2021 5:07 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Español, Nederlands, Français, عربي, English
Iih, Mpandehandeha lasa mpikatroka. Saripika avy amin’ Iih's Instagram. Nahazoana alalana.
Tamin'ny 22 Oktobra, ilay Nepaley 25 taona mpikatroka no nahatratra ny tanànan'i Sauhara rehefa nandeha 167 kilaometatra nandritra ny efatra andro niainga avy tao an-drenivohitra Kathmandu, niaraka tamin'ny vondrona namana sy olom-pantatra. Rehefa tonga tao ry zareo dia nizara fanampiana ho an'ny fianakaviana mihoatra ny 75 tao an-toerana miasa ao amin'ny sehatry ny fizahantany, izay loharanom-bola lehibe ao amin'io tanàna io, izay nisedra mafy dia mafy ny valan'aretina COVID-19.
Tsy vao sambany i Iih no nandeha an-tongotra lavitra tao Nepal, ary tsy vao sambany izy no hita lohatenin-gazety amin'ny taktikam-panoherana tsy mahazatra ataony.
Nomena ny anarana Ishan Adhikari teo am-pahaterahana, ningitrika niala ny Sekoly malaza an'i Kathmandu St. Xavier teo amin'ny faha-14 taonany i Iih ary dia nandeha an-tongotra nanavatsava an'i Nepal. Tamin'ny taona 2015 izy nandeha nanavatsava ny lembalemba antsimon'i Nepal tao anatin'ny 37 andro, nahavita 1.203 kilaometatra. Tanelanelan'ny taona 2017 sy 2018, nanavatsava ny firenena niainga avy any atsinanana ho any andrefana izy, nahavita 6.000 kilaometatra tao anatin'ny 225 andro. Tao anatin'ny nanaovany izany dia lavitr'ezaka izany izy no nanapa-kevitra ny hiala tamin'ny anarana nomena azy teo am-pahaterahana, ka nandray ny anara-tokana Iih.
CK Lal, iray amin'ireo mpanao matoandahatsoratra be mpamaky indrindra ao Nepal, raha nanoratra momba an'i Iih:
Na dia ny safidin'anaran'ny mpanoratra noraisin'i Ishan aza dia efa maningana. Ny voambolana Iih amin'ny fiteny Nepali dia midika hoe ‘ity’ ary ny dikany amin'ny sanskrit dia mampiditra ny toetran'andriamanitry ny faniriana […] ny fandikana ny Iih amin'ny fiteny Nepali dia misy ifandraisany amin'ny fanehoana fanondroadala, izay azo heverina fa atondro ny fahefana mipetraka eo amin'ny fanjakana sy ny fiarahamonina.
Ankehitriny noho ny fahazoany mpanjohy betsaka avy amin'ny media sosialy, tamin'ny taona 2016 no naIaza voalohany tao Nepal i Iih, raha voasambotra noho ny nanondrahany loko mena ny rindrin'ny Singha Durbar, foiben-toeran'ny governemantan'i Nepal, ho fanoherany ny herisetran'ny polisy izy.
Tamin'io taona  io, naodiny ho any amin'ny setriny tsy dia mahomby nataon'i Nepal iadiana amin'ny COVID-19 ny teti-panorony.
Iih nalaina tao amin'ny valandresaka ho an'ny gazety tamin'ny 9 aogositra 2020. Saripikan'i Sanjib Chaudhary. Nahazoana alalana.
Voarakitra fa mihoatra ny 170.000 ny tranga COVID-19 tao Nepal tamin'ny 2 Novambra. Ny andro nahitana tranga be indrindra dia ny tamin'ny 10 Oktobra sy ny tamin'ny 21 Oktobra, fa nihoatra ny 5.000 ny tranga vaovao tao anatin'ny andro iray monja.
Mpitsikera ny setriny ataon'ny governemanta amin'ilay valanaretina i Iih hatramin'ny nanambaràn'i Nepal ny firindrinana manerana ny firenena tamin'ny marsa. Tamin'izany fotoana izany, nanaovan'ny governemanta fitsapan'aretina RDTs ireo ahiahiana ho tratran'ny COVID-19, izay tsy dia mahomby loatra amin'ny fitsirihana ny SARS-CoV-2, ary rehefa hita ho miabo amin'ny RDT ihany vao testena PCR indray.
Avy eo Iih nikarakara ny fanentanana #EnoughIsEnough, izay nanatontosa hetsika maro nanerana ny firenena hatramin'ny Jona. Notakian'ny fanentanana ny fanitarana ny test (fitsapan'aretina), ny tsy hanohizana ny RDTs, ny fanitsiana ny tetipanorona fanokana-monina, mangarahara sy tamberin'andraikitra amin'ny fampiana ny vatsy mifandraika amin'ny COVID-19, ny fiarovana ireo mpiasa mirotsaka feno ao anatin'ny ady amin'ity aretina ity, ny fanavotana ireo olona marefo, ankoatra ireo lohahevitra hafa.
Hoy Iih raha niresaka tamin'ny OnlineKhabar:
… Namoaka tantara iray tao amin'ny Instagram aho, nanontany, “raha misy olona te-ho eny an-dalambe, alefaso aty amiko ny mari-panondroana anao Facebook, dia hanangana vondrona Facebook aho ary hampiditra anao”.
Sahabo ho 400 ireo tanora nandefa ny fanondroany nilaza fa vonona ny ho eny an-dalambe ry zareo. […]
Koa nialoha ny hanaovana zavatra, dia nanomboka nanasa ireo namany hafa ho ao amin'ny vondrona ‘Enough is Enough’ [leo tanteraka] ireo 400 ireo
Nosamborina nandritra ny hetsika #EnoughIsEnough iray tamin'ny jona i Iih:
Nosamborin'ny polisin'i Nepal niaraka tamin'olona roa hafa avy ao Maitighar i Ishan, saingy mbola nisy anjatony nanohy ny fihetsiketseham-panoherana
Ity lahatsarim-panadihadiana fohy avy amin'ny Vice Asia ity no nandrakitra ny sasantsasany tamin'ireo hetsi-panoherana vanimpotoa-mafana (asara) tao Nepal:
Tamin'ny volana jona, nipetraka hanao Satyagraha, endrika fitokonana tsy hihinan-kanina, ho fanoherana ny fepetra noraisin'ny governemanta manoloana ny COVID-19 i lih ilay tsy sasatra mandeha an-tongotra. Nofaranany ny fitokonana tsy hihinan-kanina naharitra 12 andro rehefa nosoniavin'ny manampahefana ny fifanarahana ahitana teboka 12 nifanaovany amin'ny fanentanana #EnoughIsEnough ho fametrahana setriny tsara kokoa.
Azonao atao ny manomboka ny Satyagraha mitaky amin'ny governemanta hanatsara ny fifehezany ny COVID-19 fijanonana an-trano amin'ny alalan'ny fanoratana #MySatyagraha amin'ny fiteninao amin'ny sora-baventy, mamotsitra sary sy mamoaka izany ao amin'ny media sosialy.
Voasonia androany ny fifanarahana eo amin'ny hetsika #EnoughIsEnough sy ny governemantan'i Nepal
Nanomboka Satyagraha hafa indray i lih tamin'ny 17 jolay rehefa tsikaritra fa tsy nohatsarain'ny governemanta ny fepetra raisina manoloana ny COVID-19. Natsahany ny fifadian-kanina tamin'ny 9 Aogositra rehefa nanasonia fifanarahana iray hafa ahitana teboka 12 momba ny fanentanana ny manampahefana.
Nanohy ny diany i lih hanampy ireo mila izany sy mitaky amin'ny governemanta mba hikarakara ny vahoakany.
Nanoratra tao amin'ny kaontiny Instagram izy:
Hatraiza ny halavirana
mba ho eo amin'ny misy anao?
eto ka hatrany amin'ny kintana ?